Ezokuzijabulisa - Mag Incredible
Ngakho-ke, ungu-DJ osafufusa ngesabelomali esingaphansi-esixakile – wamukelekile eklabhu! Baningi abaculi abaphukile laphaya, kodwa owazi ukwenza ibhajethi nokuthenga amagiya afanele uyisinyathelo ngaphambi kwephakethe. Ukukhetha…
Thuthukisa Amakhono Wakho Wokudlala We-Guitar Ngomunye Wabafundisi Abakhulu Bama-Guitar E-USA!
UTom Hess ungomunye wabaqeqeshi nabaqeqeshi besigingci abahlonishwa kakhulu nabathandwayo e-USA namuhla. Ungumqeqeshi onomehluko. Kuyena izinhloso zomculo zabafundi bakhe ziyizinhloso zakhe futhi futhi ngokungafani nabanye othisha besigingci, wenza…
U-Arijit Singh, Amakhonsathi Akhe nokuningi
Awudingi ukuba ngumuntu ozinikele kakhulu ezingomeni ze-Bollywood noma ze-Tollywood ukuze uzwe igama lalo mculi onhlobonhlobo- u-Arijit Singh. Sonke siyazi ukuthi u-Shahrukh Khan uthathwa njengenkosi ye-Bollywood, futhi uma kuziwa…
Ama-Sarees we-Party Trendy: I-Craze yakamuva phakathi kwe-Party Goers
Ingabe ungumthandi wephathi? Ngabe uncamela ukuya emaphathini kaningi? Uma impendulo yakho ingu-'Yebo ', uzohlala njalo uyokuya ezingutsheni zemfashini zokugqoka, kanye nezesekeli zomdlalo ezinhle. Yize iningi lethu likhetha ukugqoka izingubo zasentshonalanga ze…
Iqoqo Lesimo Sezingoma Zokuzalwa Eziphezulu
Usuku lokuzalwa luyisikhathi lapho umuntu noma inhlangano ikhumbula khona usuku lomshado lokuzalwa kwabo. Izinsuku zokuzalwa zigujwa emiphakathini ehlukahlukene, imvamisa ngesipho, iphathi, noma umkhuba wokuhamba. Ngezinsuku ezingama-365 esingakhetha kuzo, sicabange ukuthi kuzoba…
Abaholi bakwa-Israyeli bahlela ukuhlasela i-Iran
Izikhathi eziningana, u-Israel uhlele ukuhlasela amasosha ase-Iran. Lokhu kwakungunyaka we-2010, 2011 noka-2012 kepha ezinye izindaba eziningi zaba yinto. Ngokusho kwezindaba ze-baqiworld fox ukuthi uNdunankulu uBenjamin Netanyahu wayehlele noMbutho wangaleso sikhathi…
Kuyajabulisa futhi Kuyadunguzela Le Holi!
Thokozisa i-Holi ngobumnandi, ubuhlanya nobuhlanya kulo nyaka! Uma uhlela ukuhluka kancane, kufanele uye kwelinye idolobha noma isifundazwe ukuyogubha umkhosi nabangane nomndeni. Bungaza i-Holi e-Bangalore kanye namanye ama-maniacs kanye ne-your…